lundi, 04 janvier 2016 10:51
Hetsika fanesorana mpivarotra eny andalambe
Araka ny fifanarahana efa roa volana lasa izay dia nidina vao maraina teny amin'ny lalana behoririka sy ny manodidina ny mpiasan'ny kaominina nanao hetsika fanalàna ireo mpivarotra eny andalambe. Raha ny filazan'ity ramatoa iray, tompon'andraikitra eo anivon'ny kaominina dia tao amin'ny tsenan'ny pochard ihany ireo olona mivarotra eo andalana ireo ka noho izany dia averina any amin'ny toerana misy azy avy izy ireo.
dimanche, 03 janvier 2016 20:26
Sambava : 0lona 3 maty, 1 nohanin’ny voay
Namono olona ny fitsenana ny taona vaovao 2016 tany Sambava. 2 matin’ny fibobohana toaka diso tafahoatra, 1 diso voky loatra. Nisy olona nohanin’ny voay niakatra an-tanety tany Ankitsaka, Kaominina Marojala. Tovolahy iray ihany koa no voasambotrin’ny polisy fa nitondra basy ka nampiahiahy ny olona.
samedi, 02 janvier 2016 18:28
Fakon’Antananarivo : Raikitra ny “opération coup de poing”
Mamaky ady amin’ny loton’Antananarivo ny fitondram-panjakana Malagasy. Nanomboka ny 30 desamba 2015 ny atao hoe “opération coup de poing”, ka fiarabe miisa 16 fenoin-tànana, ary ampiasàna mpamatratra 115, miampy fiarabe miisa 12 mampiasa fitaovana mpamatratra, ary fiaraben’ny Tafika miisa 4 izay miaramila 24 manao fanamiana no hamatratra azy. Ireo ny fitaovana hanatanterahana izany.
samedi, 02 janvier 2016 18:27
Kaominin’Antananarivo : Tsy narotsany tamin’ny SAMVA ny ROM
Araka ny tatitry ny Filan-kevitry ny Governemanta tamin’ny 30 desambra 2015 dia tsy narotsany tamin’ny SAMVA ny ROM (Redevances sur les Ordures Ménagères), ka izany no isany mampihitsoka ny fanalana ny fakon’Antananarivo.
samedi, 02 janvier 2016 11:37
Taombaovao : Hiboka ny tetsy Analakely
Samy nanana ny fomba nankalazany ny fety daholo ny rehetra. Tao ny nijanona nifety niaraka tamin'ny fianakaviany, tao no namonjy toeram-pisakafoanana sy toeran-danonana ho an'izay manan-katao. Fa betsaka kosa no tonga nivezivezy sy nikorana tetsy Analakely sy Ambohijatovo. Ny tanora moa dia nanokon-dresaka, ny ankizy nifaly avanja tamin'ny manezy sy ny fiara kely taingenana. Ny soavaly niezaka nampiodidina ny maivaimaivana satria efa vizaka tsy nihinam-bilona koa.Ny lehibe dia nitady hatrany ampifaly ny zanany na dia hita fa reraky ny fiainana.
samedi, 02 janvier 2016 11:27
Samy fako fa tsy Samva intsony
Miholakolaka hatrany ireo tompon'andraikitra ka mifanilaka amin'ity resaka fako ity. Izao ny SAMVA milaza indray fa olana ara-tekinika no mampivangongo ny fako. Ny vokatra dia iray ihany na inona antony, dia ny loto, ny fofona ary ny aretina entiny, ny orana rahateo avy. Ny vokany dia niara-nanao fety tao anaty fako ny teto andrenivohitra. Nisy ireo fiaraben'ny tafika sy ny zandarimaria nanala ny fako fa toa tsidipahitra ihany koa. Manala kely dia mijanona. Ny tazana aloha hatreto dia madio ny toerana fanariam-pako eny amin'ny manodidina ireny toerana misy manam-pahefana ireny.
Lyons Club Sambava
vendredi, 01 janvier 2016 12:19
Sambava : Asa sosialy
Nizara fanomezana ho an'ireo Reny tera-bao sy ireo zaza izay tsy salama ao amin'ny hopitalibe Sambava ry zareo avy amin'ny Lions Club, Leo Club, ary ny avy amin'ny Tranombarotra Ravelo Antaimby.
jeudi, 31 décembre 2015 22:39
Antalaha: Mandeha ny tsindry avy any ambony
Tratra ireo olona telo voaroiroy tamin'ny fakana vola amin'ireo mpandraharaha any Antalaha. Nahagaga ny rehetra anefa fa tsy nentina tany amin'ny Zandary na tany amponja izy ireo fa naterina indray tany amin'ny trano fandraisam-bahiny lehibe ao an-tanàna ary araka ny akom-baovao avy any an-toerana dia anainga ho any Sambava ilay fiaramanidina rahampitso amin'ny 7 ora maraina, ka any ireo olona nokarohina no handray ilay fiaramanidina. Raha ny filazan'ireo Zandary sasany nanao fanadiadiana fa nandeha ny fampitahorana ny amindrana toerana azy ireo raha tsy manaraka baiko, dia nojerem-potsiny ireo olona nahiana sa fialana fotsiny koa ve fa efa nandalo ny sakosy lehibe?
jeudi, 31 décembre 2015 19:52
Mangataboahangy : Dahalo manamby 1 tapitrisa ny zandary hamotsorana azy
Saron’ny zandary ny andian-dahalo mandravarava amin’iny Amoron’i Mania sy Vakinankaratra iny rehefa nifanenjehana sy nifamaly tifitra nandritra ny efatra andro tany Mangataboahangy, Distrikan’Ambatofinandrahana, taorian’ny halatr’omby nataon’izy ireo. Manambitamby vola 1 tapitrisa Ariary ny mpanao famotorana ny lehiben’ny dahalo mba hamotsorana azy, fa tsy nijabaka tamin'izany ny zandary.
mercredi, 30 décembre 2015 10:58
Mpanao vola sandoka
Telo lahy voasambotra tany Ambatolampy, efa mpamerin-keloka ny iray.
Page 513 sur 541